Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Astana Waxay Ku Noqotay Faa'iido
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Kazakhstan Breaking News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Kobcinta suuqa oo xoog leh iyo doorbididda safarka hawada ee safarada dheer ee tareenka ayaa Kazakhstan u beddelay suuqa gudaha ee ugu kobaca badan adduunka.
Labada summadood, Air Astana iyo LCC FlyArystan, labaduba waxay si wanaagsan ugu shaqeeyeen waddooyinka gudaha.
Rakaabkii ay sidday Air Astana Group ayaa kordhay 91% ilaa 2.97 milyan.
Haddii soo kabsashadu sii jiri doonto waxay hoos ugu dhici doontaa tartan u dhexeeya kala duwanaanshaha COVID iyo qaadashada tallaalka.
Kazakhstan Air Astana Group waxay diiwaangelisay macaash dhan $ 4.9 milyan lixdii bilood ee ugu horreysay sannadka 2021, iyadoo ka soo kabsatay luminta $ 66.2 milyan muddadii Jannaayo ilaa Juun 2020. Rakaabkii qaaday ayaa kordhay 91% ilaa 2.97 milyan, oo 2.5 milyan ayaa lagu qaaday waddooyinka gudaha, koror ah 125%.
Isagoo ka faalloonaya dib -u -soo -noqoshada, Madaxweynaha & Maamulaha Guud Peter Foster ”Labada magac, Hawada Astana iyo LCC FlyArystan, labadooduba waxay si fiican u qabteen waddooyinka gudaha. Kobcinta suuqa oo xoog leh iyo doorbididda safarka hawada ee safarada dheer ee tareenka ayaa Kazakhstan u beddelay suuqa gudaha ee ugu dhaqsaha badan adduunka, iyadoo 31% kororka rakaabka uu ka sarreeyo 2019, shaki la'aan waxaa kiciyay FlyArystanQiimayaasha aadka u hooseeya. ” FlyArystan waxaa la bilaabay May 2019.
In kasta oo awoodda caalamiga ahi ay weli tahay 45% heerka 2019, Foster wuxuu tilmaamay in “wax -soo -saarka sare ee waddooyinka gobolka, oo ay weheliso baahi weyn oo loo qabo waddooyinka 'hab -nololeedka' ee Maldives, Badda Cas, Montenegro, Dubai, Turkey, Georgia iyo Sri Lanka , waxay sidoo kale gacan ka geysteen dib -u -soo -noqoshada, oo ay gacan ka geysteen kireystayaal xamuul oo joogto ah oo ku jiray Boeing 767 -kii la beddelay ”.
Foster wuxuu ka digay hagida inta ka hartay sanadka si kastaba ha ahaatee. “Lambarada kiiska COVID waxay mar kale u socdaan jihada khaldan ee Bartamaha Aasiya iyo dalal badan oo ah halka aan u duulayno. Haddii soo kabsashadu sii jiri doonto waxay ku imaan doontaa tartan u dhexeeya kala duwanaanshaha COVID iyo qaadashada tallaalka. ”
Air Astana waa iskaashi ay wada leeyihiin Samruk Kazyna Wealth Fund (51%) iyo BAE Systems PLC 49%). Waxay hadda ku shaqaysaa 36 diyaaradood oo 10 A320s ay maamusho FlyArystan.